AMBOARY TSY AFAKA MANOVA NY LAHARAM-PAHAMEHANA AMIN'NY TASK MANAGER - MALEMY
Amboary tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny Task Manager
Amboary tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny Task Manager: Raha manandrana manova ny laharam-pahamehan'ny dingana ao amin'ny Task Manager ianao ary nahazo ity hafatra diso ity dia tsy afaka manova ny laharam-pahamehana. Tsy vita ity fandidiana ity. Nolavina ny fidirana dia eo amin'ny toerana mety ianao satria anio dia hiresaka momba ny fomba hamahana ity olana ity isika. Na dia manana tombony manokana amin'ny fiarovana ny admin ianao ary mihazakazaka ny programa amin'ny maha-mpitantana anao dia mbola hiatrika hadisoana mitovy ihany ianao. Ny mpampiasa sasany koa dia hiatrika ny lesoka etsy ambany rehefa manandrana manova ny laharam-pahamehana amin'ny dingana tena izy na avo:
Tsy afaka nametraka laharam-pahamehana Realtime. Ny laharam-pahamehana kosa napetraka ho Avo fa tsy
Matetika ny mpampiasa dia mila manova ny laharam-pahamehana fotsiny rehefa tsy afaka miditra an-tsakany sy andavany io programa io satria mitaky loharanon-karena lehibe amin'ny rafitra. Ohatra, raha tsy afaka miditra amin'ny lalao mahery vaika ianao na raha hianjera eo afovoany ny lalao dia angamba mila manokatra Task Manager ianao ary manome fotoana tena izy na laharam-pahamehana ho an'ireo fizotrany mba hilalaovana ilay lalao nefa tsy hianjera. na olana taraiky.
microsoft windows 10 troubleshooter fanombohana menio
Saingy tsy ho azonao atao ny manome laharam-pahamehana ho an'ny fizotrany rehetra noho ny hafatra diso nolavina. Ny vahaolana tokana azonao eritreretina dia ny manamboatra modely azo antoka ary manandrana manome ny laharam-pahamehana tadiavina, tsara ho azonao atao ny manova ny laharam-pahamehana amin'ny maody Safe fa rehefa mizotra amin'ny Windows ianao dia manandrana manova ny laharam-pahamehana anao hiatrika ilay hafatra diso ihany.
Fomba 1: Asehoy ny fizotran'ny mpampiasa rehetra
Fomba 2: Omeo alalana feno amin'ny Administrator
Fomba 3: ATADIKA na ATAO UAC
Fomba 4: Ampidiro amin'ny fomba azo antoka
Fomba 5: Andramo ny Explorer Explorer
Fomba 6: amboary ny fametrahana Windows 10
Fanamarihana: Tsy miasa afa-tsy amin'ny Windows 7, Vista ary XP.
1.Ataovy antoka fa mampiasa an kaonty mpandrindra avy eo tsindrio havanana Biraon'ny lahasa ary safidio Task Manager.
2.Raraho ny programa na ny fampiharana izay tianao hanovana ny laharam-pahamehana.
3. Ao amin'ny checkmark an'ny Task Manager Asehoy ny fizotran'ny mpampiasa rehetra hahazoana antoka fa mihazakazaka izy amin'ny maha Administrator azy.
4.Agao indray manandrana manova ny laharam-pahamehana ary jereo raha hainao Amboary tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny olan'ny Task Manager.
ny solosainako dia mamerina tampoka ny windows 10
1. Tsindrio havanana eo amin'ny Taskbar dia safidio Task Manager.
2. Karohy ny programa tianao hanovana ny laharam-pahamehana, avy eo tsindrio havanana eo ary safidio Fananana.
3.Mifindra amin'ny Takelaka fiarovana ary tsindrio eo Manova.
4.Ataovy antoka Fanaraha-maso feno nojerena raha Administrator.
5.Click Ampiharo arahin OK.
6.Reboot ny PC-nao ary andramo indray ny manova ny laharam-pahamehana amin'ny fizotrany.
1. Kitiho ny Windows Key + R dia soraty fanaraha-maso nusrmgr.cpl (tsy misy teny nalaina) ary tsindrio Enter.
2. Amin'ny fikandrana manaraka dia tsindrio Ovao ny fanaraha-maso ny kaonty mpampiasa.
3. Voalohany, hisintona ilay mpikorisa mankany ambany hatrany ary tsindrio OK.
4.Reboot ny PC-nao ary andramo indray ny manova ny laharam-pahamehan'ny programa, raha mbola miatrika ilay ianao fidirana nolavina tohizo.
adblock plus tsy mandeha amin'ny youtube
5.Avereno sokafana ny fikandrana fanaraha-maso ny kaontin'ny mpampiasa ary sintomina hatrany hatrany ilay mpikorisa ary tsindrio OK.
6. Atsaharo ny PC-nao ary zahao raha afaka Amboary tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny olan'ny Task Manager.
Mampiasà ny iray amin'ireo fomba voalaza eto raha mandeha amin'ny maody Safe ary avy eo manandrana manova ny laharam-pahamehana amin'ny programa ary jereo raha toa ka mandeha izany.
ny fikandrana fikandrana sy ny fanamboarana ny kapila mihitsoka
Sintomy ny Process Explorer programa avy eto, dia alao antoka fa hihazona azy ho Administrator ary hanova ny laharam-pahamehana.
Ity dia hanampy ihany koa ho an'ireo mpampiasa izay tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny fotoana tena izy ary miatrika ity lesoka ity Tsy afaka nametraka laharam-pahamehana Realtime. Ny laharam-pahamehana kosa napetraka ho Avo fa tsy.
Fanamarihana: Ny fametrahana laharam-pahamehana amin'ny fotoana tena izy dia mampidi-doza tokoa satria ny fizotran'ny rafitra manankery dia mihazakazaka manana laharam-pahamehana ary raha mosarena amin'ny loharanon-karena CPU izy ireo dia tsy hahafinaritra velively ny vokany. Ny lahatsoratra ato amin'ny Internet rehetra dia mamitaka ireo mpampiasa hino fa ny fanovana ny laharam-pahamehana amin'ny fotoana tena izy dia hahatonga azy ireo hihazakazaka haingana kokoa izay tsy marina avokoa, misy tranga tena tsy fahita firy na tranga miavaka izay marina izany.
Ity fomba ity no vahaolana farany satria raha tsy misy zavatra mandeha dia azo antoka fa hanamboatra ny olana rehetra amin'ny PC ity fomba ity. Fanamboarana Fametrahana fotsiny amin'ny alàlan'ny fanavaozana eo an-toerana hanamboarana ireo olana amin'ny rafitra fa tsy mamafa ny angon-drakitra misy eo amin'ilay rafitra. Ka raha hanamboatra tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny Task Manager dia araho ity lahatsoratra ity raha hijery Ahoana no fanamboarana hametrahana mora foana ny Windows 10.
Izay no nahombiazanao Amboary tsy afaka manova ny laharam-pahamehana amin'ny Task Manager fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Bluetooth amin'ny windows 10 tsy hita
Windows 10 ity fampiharana ity dia misoroka ny fanidiana
hadisoan'ny iTunes 0xe80000a iphone xs
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fikandrana Windows 10
Ny rakitra tsy maharitra dia tsy mamafa ny windows 10